जनआवाज – राजसंस्था किन ?
अभिभावक नभएको घर र देश उस्तै उस्तै हो । बिग्रन नासिन लाग्यो भने घरका अभिभावकले खबरदारी गर्छन् र सही बाटो देखाउँछन् । देश सञ्चालनमा पनि अभिभावक चाहिन्छ । अभिभावक नभएकाले बिधि मिचिएका हुन्, संविधान थिचिएका हुन् र सबै आ–आफ्ना स्वार्थमा लम्पट भएका हुन् । राजनीतिक दलहरुलाई सही मार्ग देखाउने, खबरदार गर्ने अभिभावक छैनन् र देश उँभो न उँधो भएको हो ।
राजतन्त्र फालेर ठूलै युद्ध जितेको घोषणा गर्नेहरुले जीतलाई आफ्नै पेवा बनाए, असली हकदार नागरिकले त्यो जीतबाट पीडामात्र पाए । जनता र देशप्रति जवाफदेहीता किन हुन सकेन ? यसबारेमा खबरदार गर्ने कोही छैन । यहीकारण भाइ फुटे गवाँर लुटेको स्थिति छ । लोकतन्त्र त आयो, लोकले केही पाएन । लोकले पाउनुपर्ने सेवा सुविधामा यिनै नेता र विदेशीले पो राइँदाइँ चलाएका छन् ।
यहीकारणले जनताले राजतन्त्र सम्झेका हुन् । राजतन्त्र भयो भने अभिभावकीय भूमिका निभाउने थियो, देश र जनतामाथि यतिसम्मको अन्याय र अत्याचार हुन पाउने थिएन । देशमा जुन प्रकारको ब्रम्हलूट चम्केको छ, यस्तो महामारीले देश र जनतालाई ठूलो मर्का पारेकाले पनि राजतन्त्र जिन्दावाद भन्न बाध्य छ जनता ।
जनताप्रति, देशप्रति उत्तरदायित्व खोज्नु लोकतन्त्रको असफलता हो ।
युवाहरुको समुहले राजधानी र देशका अन्य सहरहरुमा राजसंस्था पुनस्र्थापनाको माँग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् । राजधानीको प्रदर्शनमा राप्रपा निकट र युवा संगठनका नेताहरुसहितको सहभागिता पनि देख्न सकिन्छ । राजधानीको बौद्धमा राप्रपा युवा संगठनका विशेष तामाङको नेतृत्वमा राजतन्त्र चाहियो भन्दै प्रदर्शन हुने गरेको छ । राजसंस्था पुनःस्थापनाको माँग देशैभरि उठिरहेको छ, प्रदर्शन भइरहेका छन् । राजसंस्थाको माँग गर्नेहरु देश लथालिङ्ग भइसक्यो, देशलाई सम्हाल्न राजसंस्थाको आवश्यक भयो भन्ने तर्क दिइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक राजसंस्था राप्रपाको सिद्धान्त भए पनि राप्रपाका ठूला नेताहरु सडकमा उत्रिएका छैनन् ।